otú ọtụtụ ka ị maara banyere Spotify logo
Part 1.Spotify: Otu nnyocha
Part 2.Logo: History na Transition
Part3.The New Identity, na Colorizer
Part 5.Can anyị na-eji Spotify Logo?
1.Spotify: Otu nnyocha
A music ika, onye nke ya ụdị, na-enwe obo ihe karịrị nde 30 songs na inwe a ibu ọnụ ọgụgụ nke 60 nde ọrụ ghọrọ a sensashion na a isiokwu nke ikwu n'etiti ya Fans, ozugbo ha chọpụtara na mgbanwe ke logo.
Spotify bụghị nanị a music gụgharia ngwa dị ka iTunes ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ mmemmem DRM na-akọ na-eduga media ụlọ ọrụ dị ka Sony, Warner Music Group, Universal etc.Features dị ka òkè nke playlist na Radio, mkpakọrịta nke siri dị ka Taylor na Wallach, na iru ala na-apụghị iru nke ndị ọrụ site ngwa ọdịnala na ahịa mgbe niile wee na-Spotify n'elu nke tojupụtara. Nke a rụpụtara a ngwa ngwa na-abawanye na ọnụ ọgụgụ nke Fans na-emecha nnyocha mgbe logo gbanwere.
2.Logo: History na Transition
N'afọ 2013, Spotify gbanwere ya logo n'ihi ọtụtụ ihe dị ka ogbenye mmetụta, na-erughị mara mma, advertisement wdg The ochie logo ugbua ka enwere a pitch green acha gburugburu (na RGB ji 180,211,75), na nwa acha curved edoghi (na-anọchite anya ụda ebili mmiri ) gafere ya. Site n'akụkụ, ụlọ ọrụ aha 'Spotify' dere Proxima Nova font. Nke a logo bụghị na mara mma na emeghị rịọrọ Mgbe enịm n'elu ihe oyiyi biiri si n'ebe ọzọ. Company kweere na ọ bụ a egwú ika na ọ bụghị oru nzukọ nke adịghị embed ha logo na ihe oyiyi ọ bụla. N'ihi ya, ọ dị mkpa a logo nke nwere ike ịmepụta a mma anya ma na-eche, mgbe enịm na ihe oyiyi nke celebrity dị ka naa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ (nke nwere ike ugbu a ga-hụrụ nnọọ ugboro ugboro).
3.The New Identity, na Colorizer
N'ihi ya a ọhụrụ logo ke ẹkenam ke ahịa, nke bụ fọrọ nke nta ihe emekwa nke gara aga otu, ma e wezụga na green agba dochie na Mkpa ọkụ ndò nke ya.
Otú ọ dị nke a ọhụrụ ẹkenam logo okpu ke-amị chọrọ N'ihi na mgbe ahụ, otu ọhụrụ wee ebe. Collins, ọhụrụ logo onye chere na nke duotone akwụkwọ ịma ọkwa. The duotone oyiyi ndị nnọọ nkịtị na 1960, na ezie na ịbụ ọnụ ala, anya ọma. Collin nwere agụụ-eji nke a echiche na improvisation nke Spotify logo. Dị ka a mmebe, Collin chere na nke dị iche iche agba atụmatụ maka logo nke nwere ike dakọtara na ndabere image na n'ikpeazụ kwubiri na ọ dịghị agba ga-ofu logo, kama na agba ga-gbanwere dị ka onyinyo. Nke a echiche, na ibe mụrụ a software aha ya bụ "The Colorizer". The Colorizer na-kenyere maka akpaaka nke agba atụmatụ nhọrọ usoro.
Nke a na obibia nke na-agbanwe agbanwe logo nke ọ bụla image kere mma akwụkwọ ịma ọkwa maka mgbasa ozi na bu ma nkwaghari nke na-agbanwe agbanwe isi logo (emekwa) e bụghị ekele na a katọrọ na nnukwu ọnụ ọgụgụ.
Ọtụtụ n'ime Spotify ọrụ kpọrọ ya a 'imeju ọchịchọ onwe onye'-eme ihe, dị ka ha na-adịghị hụrụ arụmụka ezi uche nyere site na ụlọ ọrụ megide agbanwe agbanwe logo. Ọtụtụ ndị ọzọ rụrụ ụka na ụlọ ọrụ kwesịrị ilekwasị anya rụọ ọrụ ndị isi ọrụ, kama na emefu na-abaghị uru nwere dị ka logo. Na-agbanwe agbanwe nke logo bụ otu n'ime ụzọ na-adọta ndị ọrụ na jidere ha ntị azụ na ngwaahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji nke a atọ mgbe mgbe, ma ihe wee na-ezighị ezi na Spotify bụ oge dị mkpirikpi nke na ha gbalịrị nke a. Ọrụ kwa kwuru na flaws nke ngwa n'otu oge. Ọ nwere ike sị na ọ dịghị ihe wee ziri ezi n'ihi na Spotify.
5.Can anyị na-eji Spotify Logo?
Iji mee ka ngwaahịa ihe ịga nke ọma, Spotify kwere ọzọ ahịa na ọrụ. Ịgbaso ụkpụrụ nduzi, ọzọ ndị ahụ na free ime ka improvised ngwa, na-eji atụmatụ nke Spotify, ma dị nnọọ mma karịa ya ala ngwa. Ka ihe atụ, ihe ngwa-egosipụta lyrics nke song mgbe ọ na-egwuri nwere ike-atụle. Spotify mere o doo anya na a nkwere nke na-emepe emepe ngwa ekwesịghị-emeso dị ka nnwere onwe na-eji logo nke ụlọ ọrụ. Ma na imewe ụkpụrụ nduzi na Ikikere nkwekọrịta, ụlọ ọrụ na-eme ka ọ na-eguzo doro anya banyere ojiji nke ya nwere ọgụgụ isi Njirimara.
Logos, edenyere, ọrụ akara, ngalaba aha wdg dara n'okpuru udi nke ndị nwere ọgụgụ isi ihe onwunwe nke mmadụ ọ bụla ma ọ bụ nzukọ. Ha na-equivalently kwesịrị dị ka ọ bụla tangible akpan owo. N'ihi ya e nwere n'ụzọ ụfọdụ n'ihi na-egbochi ohi nke ndị a nwere ọgụgụ isi Njirimara. Ma onye dere / ede akwụkwọ / mmebe nwere ike nweta ihe patent nke ọrụ ya, ma ọ bụ n'ihi na ọ pụrụ ịnọgide na-nwebiisinka. Otu n'ime ndị dị ọnụ ala ụzọ meere ndị nwere ọgụgụ isi ihe onwunwe bụ biputere ihe envelop nwere ọrụ gị na gị onwe gị adreesị. The akara site nzi ozi ọrụ na-egosi ịbụ eziokwu nke ụbọchị na N'ihi ya arụ ọrụ gị. Site ọ bụla nke dị n'elu ụzọ, akụ dị ka logo, edenyere wdg nwere ike chekwaa ya.
> Resource> Spotify> otú ọtụtụ Ihe Ị Maara Banyere Spotify Logo